Codka shacabka - Soo Bandhigida Xaqiiqada
Socdaalka sharci darada ah ee loo yaqaan tahriibku, wuxuu dhibaato dhaqaale iyo mid maskaxeedba ku reebaa qoysaskii ay ka yimaadeen dadka soo tahriibay.
“Mar walba oo aan soo xasuusto tahriibka waxaa maskaxday soo dhaca waxyaalo xun” sidaas waxaa yiri Asad oo jooga Bosaso oo ka mid magaalooyinka ugu wayn Somalia. “ tahriibka waxaan ku waayey walaalkay iyo ilaa 10 qaraabadayda ah” ayuu yiri Asad
Asad wuxuu badda Mediterranean ee u dhaxaysa Afrika iyo Yurub. Sidoo kale walaashiis ayaa iyana gashay tahriib. Waxay tahriibka iyada oo ka warhaysa waxa ay kala kulmi karto tahriibka.
Tegitaanka Asad walaalihiis waxay reerka u soo jiiday qalaale burbur. Waxaa reerka khasab ku noqotay in ay iibiyaan wax walba oo ay haysteen si ay u bixiyaan lacagta magafaha.
“2015kii ayaa walaashay waxay u tahriibtay yurub waxaana ku baxay 8000 oo doolar, waxay dhaawacday dhaqaalihii reerka” ayuu yiri
Sida Asad sheegay tahriib saamayn dhaqaale xumo oo weyn ayuu ku yeeshay reerkooda, reerku waxay hadda ku jiraan guri kiro ah kadib markii ay iibiyeen guryahoodii si ay u bixiyaan lacagta madax furashada ah ee magafuhu ka dalbaday dadkooda.
Samaamayn maskaxeed ee tahriibku reebay ehelada lama soo koobi karo. Hooyooyin badan ayaa waxaa ku dhacday murugo aan dhamaad lahayn ka dib markii ay maqleen in caruurtootii xabsi ku jiraan ama ku dhinteen gacanta magafaha.
Asad wuxuu xasuustaa murugadii uu dareemay markii uu maqlay in walaashiis tahriibtay. “ meel walba waan ka raadiyey oo xataa waxaan gaari ku maray 100 km si ay aan u soo helo. Waxaan mar walba iswaydiinayey waxay ahayd “toloow ma Alqaeda ayaa kaxaysan doona, mise Daacish ayaa laga iibin doonaa mise qolyaha dadka ka ganacsada ayey gacanta u geli doontaa?” waxyaabahas ayaa niyadayda ku soo dhacay
Asad hooyadiis waxay ka walwalsanayd waxa ay gabadheedu la kulmi doonto sidaas darteedna waxay samaysay wax walba oo ay nafteeda ku badbaadin kartay, waxay iibisay gurigii and dahabkii ay lahayd
Asad wuxuu sheegay in maalmahan hooyooyinku ay bilaabeen in ay ka dawarsadaan (tuugsadaan) masaajidada hortooda, maqaaxiyaha iyo suuqyadaba. Duruufaha soo wajahay ayaa Dumarkan ku kalifay in ay tuugsadaan
Asad wuxuu sheegay in tahriibku saameeyey sidoo kale aabeyaasha dhalinyarta tahriibtay. Asad wuxuu xasuustaa sidii oday waayeel ahi u naxay markuu ogaaday in wiilkiisii tahriibay. Markii uu warka maqlay waxaa ku dhacay jeex qalal naxdin darted. Qoyskan hadda waxaa soo food saartay culays siyaado ah. Ma in ay odaga daweeyaan baa mise in ay wiilka lacag u diraan?
Asad wuxuu aaminsanyahay in tahriibku uusan qofna faaiido u lahayn. Wuxuu yiri ilaa hadda ma arkin qof ka yimid qurbaha oo wax haysto.
“Ma arkin qof yurub ka soo laabtay oo iibsanaya guryo, ama waalidkood xajisiinaya ama xataa gaari iibsanaya” ayuu yiri Asad. ”ma arkin waalid ku faraxsan in caruurtooda yurub aadaan. Haddii aadan wax faaiido ah ka soo helayn, waxaa kuu fiicnaan laheyd in aad dalkaaga jooogto… xataa hadii wadankaagu baaba’sanyahay waa dalkaagii”
Halkan ka dhegay Asad oo ka sheekaynaya sida tahriibku u saameeyey bulshada.
Medina waxay raadinaysay bilow cusub